I-bungalow ethandekayo eyi-103 e-Exloo-igadi enkulu - I-Airbnb
I-bungalow ethandekayo eyi-103 e-Exloo-igadi enkulu
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguBas
I-bungalow ethandekayo kwindawo entle! Ngegadi enkulu ebiyelweyo ejikeleze i-bungalow. I-bungalow ikwinqanaba elinye. Igumbi lokuhlala elihle, ikhitshi elisebenzayo, igumbi lokuhlambela elitsha kunye namagumbi okulala ama-3 amahle. Indawo yokupaka yabucala kwi-bungalow. Kukho indawo yokudlala yabucala phambi kwe-bungalow yabaqeshi bethu kunye nebala lokudlala eliqhelekileyo epakini (umzuzu omnye wokuhamba). Kukwakho nomkhondo wempompo, inkundla yentenetya, iitafile zetafile yentenetya, ibhola yevoli, kunye netrampoline yomoya enkulu.
Uya kuhlala apha kwi-bungalow enkulu yabucala. I-bungalow iphantse ibe yi-1000 square metres yegadi yabucala. Kule ntwasahlobo kunye nehlobo unokunandipha iintyatyambo ezintle kubantwana beendwendwe zethu, kukho izixhobo ezahlukeneyo zendawo yokudlala yangasese egadini njenge-seesaw, isakhelo sokunyuka, isilayidi, i-swing, i-trampoline kunye nesixhobo sokuguqula.
I-bungalow ibekwe kwipaki entle, ezolileyo yeholide. Ukusuka kwi-bungalow uhamba ungene kwindawo enkulu yokugcina indalo.
Elalini kukwayinto entle ukuhlala .... nice nabantwana ukuya kwilizwe le-gnome, umhlambi weegusha okanye ukonwabele ukuhamba kakuhle emahlathini.
Ungonwabela zonke iiterras kunye neendawo zokutyela ezimnandi ezilalini!
4.66 out of 5 stars from 138 reviews
4.66 · Izimvo eziyi-138
Kuninzi kakhulu ukudwelisa kule ndawo emangalisayo. Ngokwenene into yomntu wonke efana nale:
- indawo enkulu yolondolozo lwendalo emelene nepaki. Uphuma epakini ngesango ngasemva kwaye usekuqaleni kweendlela ezi-5 zokuhamba ezahlukeneyo. Ungabona zonke iintlobo zezinto apha ezifana neenkomo ezityayo, iidolmens, indalo, njl.
- ngentlawulo encinci eyongezelelweyo ungaya kwindawo yokuqubha yangaphandle iDe Leewal e-Exloo
Indawo yokuqubha evulekileyo i-De Leewal e-Exloo ikwindawo entle engqongwe ngamaplanga kunye nobushushu, ichibi lokuqubha linendawo yosana / idama lomntwana, idama lokhuphiswano, apho unokuqubha khona ngokukhululeka kwaye echibini yolonwabo kunye esofeni bubble, a whitewater mlanjana. slides ezimbini ezikhwankqisayo (a eludongeni eliphezulu ekuthiwa kunye multislide).
Kukwakho nebala elikhulu lokudlala kunye nokutshiswa lilanga elinezixhobo zokudlala ezahlukeneyo, inkundla yevolleyball yaselwandle kunye neetafile zentenetya. Kukwakho nendawo yokutyela enethafa elikhulu langaphandle.
Ewe, kulungile kwabancinci nabadala ukuhlala kwindawo yokuqubha iDe Leewal.
-Ilizwe le-gnome Exloo (imizuzu emi-5)
-Wildlands Emmen zoo (imizuzu eyi-15)
- hunebed imyuziyam Borger (10 imizuzu)
-Ipaki yokuzonwabisa yaseDrouwenerzand (imizuzu eyi-15)
-i-trout fish pond (imizuzu eyi-10)
- indlela yomthi womthi (imizuzu eyi-15)
Ivenkile enkulu (imizuzu emi-5)
- indawo yokubhaka (imizuzu emi-5)
-Ibala elikhulu legalufa kunye neziko lokukhwela ihashe lesikolo Exloo (umzuzu om-1)
Kwaye kuninzi kakhulu okufumanayo nokwenza eDrenthe!
Umbuki zindwendwe ngu- Bas
Wij zijn een leuk gezin met 2 kinderen van 8 en 18 jaar. Wij komen erg graag in Drenthe ( bijna ieder weekend) we hebben 4 bungalows op dit heerlijke park. Een voor ons zelf en de 3 mooiste voor de verhuur.
Wij vinden het geweldig om gasten te ontvangen in een prachtige, schone bungalow met een schitterde tuin. We willen graag dat elke gast zich welkom voelt in een van onze schitterende bungalows.
Sisoloko sifumaneka ngefowuni ngemibuzo ngexesha lokuhlala kwakho. Ungasoloko ufowuna, u-whatsapp okanye uthumele imiyalezo nge-airbnb.
Ngempelaveki sihlala sifumaneka kwiBungalow 102. Ungasoloko uqhagamshelana nathi.